Laser ịkpụchasịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịịị eji ebi akwụkwọ ahụ na akwa - Akwụkwọ Laser
Igwe eji eme ihe oria CO2
Igwe eji egbu osisi
Ngwaọrụ Galvo Laser
Ọkpụkpụ Laser ịkpụ Ọhụụ
Label Laser Die Cut Machine
Ngwaọrụ Laser Custom
Akpụkpọ anụ Laser
Igwe Ọkpụkpụ Fiber Laser
Ngwunye Cutube Laser
Metal Sheet Laser Cut Cut Machine
Mpempe akwụkwọ na tube Laser Cutter
Ngalaba Na-abụghị Ndị Metal
Sublimation Eserese Mpempe
Ejiji & Uwe
Ọkpụkpụ Laser nke Sublimated Textiles
Ngwa nke CO2 Laser Machines maka Ngalaba Na-abụghị Metal
Laser ịkpụchasịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịsịa na akwụkwọ eji ebi akwụkwọ na akwa
A na-eji teknụzụ obibi ugbu a n'ọtụtụ ụlọ ọrụ dịka akwa uwe, akwa mmiri, uwe, ọkọlọtọ, ọkọlọtọ, na akara dị nro. Taa usoro eji ebi akwụkwọ ederede dị elu na-achọ ọbụna ngbanwe ngwa ngwa. Kedu ụzọ kachasị mma maka ịkpụ akwa e biri ebi na akwa? Mbelata aka ma ọ bụ ịkpụzi usoro ọdịnala nwere ọtụtụ oke. Mbelata laser bụ usoro kachasị ewu ewu maka mkpochapu akwa akwa akwụkwọ.
Ngwọta Ọkpụkpụ Laser Ọhụụ
Ngwọta a na-eme ka ihe belata ụdị akwa ahụ ma ọ bụ akwa ngwa ngwa ozugbo, na-akwụghachi ụgwọ maka ndagide ọ bụla na-ejide n'aka na akwa akwa.
Ndị kamera nyochara akwa ahụ, chọpụta ma mata ngwa ngwa edepụtara, ma ọ bụ bulie akara ndebanye edere ma wee igwe laser belata atụmatụ ndị ahọpụtara. Usoro ahụ dum na-akpaghị aka zuru oke.
Usoro nlegharị anya nwere usoro abụọ
Usoro ọhụụ a nwere ikike iji ngwa ngwa nyochaa akwụkwọ ndị e biri ebi n’elu akwa ịkpụ ma mepụta vetik na-akpaghị aka. Enweghị mkpa ịmepụta atụmatụ ịkpụ, zighachi nha ọ bụla n ’ụzọ ọ bụla wee mepụta ọkọlọtọ mkpụkọ ọfụma, ọkọlọtọ ma ọ bụ ihe eji edozi ya nwere mma mechiri emechi.
Nyochaa akara ndebanye aha
A na-eji sistemụ igwefoto egosi akara ndebanye edepụtara n'akwụkwọ gị. A ga-akwụ ụgwọ akara ahụ nke ọma site na sistemụ laser anyị na ọnọdụ, ọnụ ọgụgụ na mbibi nke akwụkwọ a ga-akwụ ụgwọ n'ihi nyocha ọgụgụ isi nke akara ndebanye aha.
Ngwa nke Laser Cutting Sublimation Ederede Ederede na Iwu
Uwe egwuregwu na uwe ndị e biri ebi, akpụkpọ ụkwụ, akwa ụlọ
Usoro Laser Cuter akpali ọhụụ dị mma maka ịkpụ akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ karịsịa n'ihi ike ya ịkpụchasị ihe dị mfe ma ọ bụ agbagọ agbacha agbacha - ụdị ụdị uwe egwuregwu (dịka akwa ịgba bọọlụ, otu egwuregwu / akwa, akwa mmiri, akwa ụkwụ, iyi uwe wdg.)
Obere akara, leta, onu ogugu na ihe doro anya
The laser cutter na-eji akara ndenye, na GoldenCAM software n'ime laser cutter nwere arụmọrụ ụgwọ arụmọrụ, nke nwere ike na-akpaghị aka na-akọwapụtara ndị na-akọwapụta ihe e dere n'ụdị nsị nke ngwa.
Ọkọlọtọ, ọkọlọtọ, nnukwu eserese na akara dị nro
Ezubere azịza a laser a kapịrị ọnụ maka ụlọ ọrụ dijitalụ na-ebi akwụkwọ. Ọ na-ewepụta ike na-enweghị atụ maka ịmechasị usoro dị iche iche nke edere na nke ma ọ bụ nke na-acha odo odo ma nwekwaa ya ọfụma na ogologo ya.
EGO NA-EKWU NKWUKWU EGO NA-EBURU EGO EGO.
Ọkpụkpụ Nyocha Laser Ọhụụ
Igwe Ọkpụkpụ Igwe Ọdụdọ Smart Vision Double
Ndebanye aha Laser Cut Cut Machine
Nnukwu Laskpụ Laser Mpempe Laser maka Mbipụta Nro
Ogige Ulo Oru nke Laser, ianzọ Tianxing, Hengdian Street, Chuanlong Avenue, Huangpi District, Wuhan, Hubei, China
Njikọ mara mma
Igwe eji eme ihe eji eme ihe eji eme ihe